Afeef alaabta cannabidiol (CBD)| Dragons Head Shop
Bogga ugu weyn → Afeef badeecooyinka cannabidiol (CBD)
Afeef badeecooyinka cannabidiol (CBD)
Ujeedada loogu talagalay CBD waxaa loo adeegsadaa kaabis dabiici ah. CBD waa inaysan ku beddelin daawo rasmi ahaan loogu qoray xirfadle caafimaad. Badeecadaha CBD ee lagu iibiyo mareegahayaga looma jeedin ogaanshaha, daaweynta, daaweynta ama ka -hortagga cudur kasta. Had iyo jeer la tasho xirfadlahaaga daryeelka caafimaadka ka hor intaadan qaadin wax alaab CBD ah haddii ay dhacdo waxyeellooyin ama dhibaatooyin iman kara, ka hor intaadan isticmaalin badeecad kasta ama aadan u diyaarin qorshe daaweyn cudur kasta ama xaalad kasta.
Dragons Head Shop Ltd mas'uul kama aha adeegsiga aan habboonayn ee alaabta CBD iyo is-ogaanshaha ama daaweynta iyadoo la adeegsanayo alaabtan. Alaabtaani ma aha daawooyin dhakhtar qoray oo waa inaanay beddelin ama u dhaqmin beddel daaweyn caafimaad oo la kormeero. Haddii aad ka shakisan tahay in adiga ama xayawaankaaga la ildaran cillado caafimaad, la tasho ruqsad, xirfadle caafimaad oo aqoon leh.
Dhammaan badeecadaha laga heli karo websaydhkeenna waxaa ku jira wax ka yar 0.2%THC, sida lagu go'aamiyay sharciga EU iyo UK. Dukaan -weynaha Dragons wax mas'uul kama aha adeegsiga aan habboonayn ee macluumaadka ama adeegyada websaydhkan. Dukaanka Madaxa ee Dragons mas'uul kama aha waxyeellada tooska ah ama aan tooska ahayn ee ay sababtay si kasta oo loo adeegsado adeegsiga macluumaadka ama adeegyada websaydhkan. Xaddidaadda mas'uuliyadda, waxaa ku jira magdhow, toos ah, aan toos ahayn, waxyeellada ka dhalan karta, luminta xogta, dakhliga ama faa'iidada, hantida waxyeelloobay, sheegashada dhinac saddexaad iyo sheegashooyinka kale ee soo bixi kara.
Afeefku wuxuu quseeyaa waxyeello kasta oo la arko ama dhaawac ah oo ka dhasha macluumaadka mareegahaan.